စိုကျပြိုးရေး ဝါသနာရှငျမြားအတှကျ သံပုရာပငျ စိုကျပြိုးနညျး …. – Nyi Ma Lay
စိုကျပြိုးရေး ဝါသနာရှငျမြားအတှကျ သံပုရာပငျ စိုကျပြိုးနညျး ….
ပထမ စိုကျမညျ့နရောကို ဂြုတျတိုကျပွီး မွညှေိ၊ ပေါငျးမွကျပွောငျအောငျ ရှငျးလိုကျပေါ့။ ပွီးရငျ တဈတနျးနဲ့ တဈတနျး ရှဈပေ။ တဈပငျနဲ့တဈပငျကွား ရှဈပေ ပန်နကျရိုကျပါ။ ပန်နကျရိုကျပွီးရငျ ၎င်းငျးနရောတှမှော နှဈပအေကယျြ၊ နှဈပေ အနကျ စိုကျကငျြးတူးပါ။
တူးလို့ရတဲ့ မွကွေီးတှကေို ကငျြးရဲ့ညာဘကျခွမျးမှာပုံ၊ တဈကငျြးအတှကျ နှားခြေး၊ မွဆှေေး၊ ကွကျခြေး၊ စကျဖှဲပွာစုဆောငျးပါ။ နှားခြေး၊ မွဆှေေး သုည ဒသမ ၄ တငျး၊ ကွကျခြေး သုည ဒသမ ၄ တငျး၊ စကျဖှဲပွာတဈပွညျ၊ ဂဈြပဆနျကြောကျမှုနျ့ နို့ဆီတဈဘူး၊ ၁၅း၁၅း၁၅ ပတျလညျ N : P : K ကှနျပေါငျး မွဩေဇာ နို့ဆီသုံးဘူး၊ ဖြူရာဒနျဆေးမှုနျ့ စတီးဇှနျး တဈဇှနျးတို့ကို ကငျြး၏ညာဘကျတှငျ ပုံထားသော ကငျြးတူးရတဲ့မွစော တဈဝကျနဲ့ သမအောငျရောမှပေါ။
၎င်းငျးမွအေရောကို နှဈပပေတျလညျကငျြးထဲသို့ ပွနျထညျ့ပွီး မွသေိပျသှားအောငျ ခွထေောကျဖွငျ့ ဖှဖှနငျး သိပျပေးပါ။ မွအေရောကို ကငျြးပွညျ့အောငျ ထညျ့ပါ။ ပွီးလြှငျ စိုကျကငျြးအားလုံးကို ရဝေအောငျလောငျး၍ နှဈပတျခနျ့နှပျထားပေးပါ။
ရကေို တဈရကျခွားတဈခါ လောငျးပေးပါ။ ကငျြးထဲရှိ မွသေား အိကသြှားပါက မွအေရောကို ကငျြးပွညျ့သညျအထိ ပွနျထညျ့ပေးပွီး သိပျအောငျ ခွဖွေငျ့ ဖှဖှနငျးပါ။ ရလေောငျးနှပျထားပါ။
မွပွေငျပွီးရငျတော့ စိုကျဖို့ပွငျရတော့ မှာပေါ့။ အသနျမာဆုံးသံပုရာပြိုးပငျတှကေို ရှေးပါ။ အပငျမှာ ကိုငျးခွောကျ၊ ပိုးကိုကျ၊ ရောဂါကသြောကိုငျး၊ အရှကျ၊ ပငျစညျမြားကို ကတျကွေးထကျထကျနဲ့ ညှပျ၍ ဖယျရှားပဈပါ။ ကငျြးတဈကငျြးလြှငျ သံပုရာပြိုးတဈအိတျစီ ကွိုတငျခထြားပါ။
သံပုရာ ပြိုးပငျ စိုကျရနျ ပထမစိုကျကငျြးထဲမှာ ဖွညျ့ထားသော မွဆှေေးအရောမွကေို ကငျြးအလယျတညျ့တညျ့နရောမှာ သံပုရာပြိုးအိတျအမွငျ့ထကျ တဈလကျမခနျ့လြှော့၍ ပြိုးပငျခရြနျ ကငျြးငယျတူးပါ။ (သံပုရာပြိုးပငျ စိုကျလြှငျ ပြိုးအိတျ အတှငျးရှိမွသေညျ စိုကျကငျြးကွီးထဲရှိမွထေကျ တဈလကျမမွငျ့နစေရေနျ)၊ ပြိုးအိတျကိုမွလေုံးမကှဲစရေနျ ဓားထကျထကျ (ခဲတံခြှနျဓား) ဖွငျ့ အပျေါမှအောကျသို့ခှဲခပြါ။
ပြိုးအိတျအတှငျးရှိမွကေို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ပိုကျ၍ စိုကျကငျြးငယျအတှငျးခြ စိုကျပါ။ အိတျကို တဖွညျးဖွညျးဆှဲထုတျ ပါ။ အပငျခွပေတျပတျလညျနှငျ့ အပငျခွမွေသေိပျသှားစရေနျ မွစောဖွညျ့၍ လကျဖွငျ့ဦးစှာ ဖိသပျပေးပါ။
နောကျ အပငျခွကေိုခွဖေနှောငျ့နှဈခုကပျ၍ ပတျပတျလညျခွဖေနောငျ့ဖွငျ့ နငျးသိပျပေးပါ။ အပငျအမွဈစှဲမွနျစရေနျဖွဈပါတယျ။ ပွီးလြှငျ ပြိုးပငျနှငျ့ခွောကျလကျမခနျ့ခှာပွီး အရှညျသုံးပခေနျ့ရှိ ဝါးသေးသေးကိုခြှနျ၍စိုကျပေးပါ။ ၎င်းငျးဝါးနှငျ့ ပြိုးပငျငယျကိုမလှုပျစရေနျ ကွိုးဖွငျ့ခညျြပေးထားပါ။
ပွီးလြှငျ သံပုရာပငျအခွေ၌ ကောကျရိုး၊ မွကျခွောကျမြားဖုံးအုပျပေးထားပါ။ စိုကျပြိုးပွီးလြှငျ ရနေစေ့ဉျလောငျးပေးပါ။ နှဈပတျခနျ့ကွာလြှငျ အညှနျ့သဈမြား ထှကျလာပါလိမျ့မညျ။ အပငျပွုစုစောငျ့ရှောကျဖို့ကတော့ ရမှေနျမှနျလောငျးပါ။
တဈနှဈအတှငျး မွဆှေေး၊ ဓာတျမွဩေဇာ ထပျဖွညျ့ရနျ မလိုသေးပါ။ တဈနှဈကြျောမှသာ သတျမှတျ ဓာတျမွဩေဇာနှုနျးထား၊ မွဆှေေးနှုနျးထား ထပျဖွညျ့ရနျ လိုပါသညျ။ အပငျကွီးလာလြှငျ ခွောကျလတဈကွိမျမွစောကြှေးပါ။ မလိုသောကိုငျးမြားရှငျးပါ။ အပျေါထောငျထှကျသောကိုငျးမြား အရငျးက ဖွတျပဈပါ။
ဖော့စဖရပျဓာတျမြားမြားပါသော ရှကျဖနျြးမွဩေဇာ တဈနှဈလေးကွိမျဖနျြးပေးပါ။ အပှငျ့ထှကျခါနီးရငျ ယမျးစိမျး (ပိုတကျစီယမျနိုကျထရိတျ=KNO3) ဟငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး၊ ရလေေးဂါလံနှငျ့ရော၍ အပငျပျေါဖနျြးပေးပါ။ အလုံးကွီး၍ အလုံးလှစပေါလိမျ့မယျ။
သီးလာရငျ လုံးပိနျ၊ လုံးညှပျခြှပေဈပါ။ ပိုးမှားရောဂါ အထူးဂရုပွုရမှာကတော့ ပနြဲ့ မိလီဘတျပိုးတို့ဘဲဖွဈပါတယျ။ အပငျကို အမွဲလလေ့ာပွီး လကျဦးမှုရအောငျကွိုတငျ ကာကှယျနှိမျနငျးပါ။ ရောဂါကတော့ ကိုငျးဖြားခွောကျရောဂါဆိုးရှားစပေါတယျ။ မှိုကွောငျ့ဖွဈတာပါ။ မှိုရောဂါသတျဆေးနဲ့ ကွိုတငျကာကှယျနှိမျနငျးပါလို့ မှာ လိုကျပါရစဗြော။
တောငျသူ လယျသမားကွီးမြား အားလုံး သီးနှံတှအေထှကျတိုးလို့ လူမှုစီးပှားဘဝ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျး တောငျးလကျြ…။ Credit – အောငျဆနျး (စိုကျပြိုးရေး)
ပထမ စိုက်မည့်နေရာကို ဂျုတ်တိုက်ပြီး မြေညှိ၊ ပေါင်းမြက်ပြောင်အောင် ရှင်းလိုက်ပေါ့။ ပြီးရင် တစ်တန်းနဲ့ တစ်တန်း ရှစ်ပေ။ တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ကြား ရှစ်ပေ ပန္နက်ရိုက်ပါ။ ပန္နက်ရိုက်ပြီးရင် ၎င်းနေရာတွေမှာ နှစ်ပေအကျယ်၊ နှစ်ပေ အနက် စိုက်ကျင်းတူးပါ။
တူးလို့ရတဲ့ မြေကြီးတွေကို ကျင်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာပုံ၊ တစ်ကျင်းအတွက် နွားချေး၊ မြေဆွေး၊ ကြက်ချေး၊ စက်ဖွဲပြာစုဆောင်းပါ။ နွားချေး၊ မြေဆွေး သုည ဒသမ ၄ တင်း၊ ကြက်ချေး သုည ဒသမ ၄ တင်း၊ စက်ဖွဲပြာတစ်ပြည်၊ ဂျစ်ပဆန်ကျောက်မှုန့် နို့ဆီတစ်ဘူး၊ ၁၅း၁၅း၁၅ ပတ်လည် N : P : K ကွန်ပေါင်း မြေဩဇာ နို့ဆီသုံးဘူး၊ ဖျူရာဒန်ဆေးမှုန့် စတီးဇွန်း တစ်ဇွန်းတို့ကို ကျင်း၏ညာဘက်တွင် ပုံထားသော ကျင်းတူးရတဲ့မြေစာ တစ်ဝက်နဲ့ သမအောင်ရောမွှေပါ။
၎င်းမြေအရောကို နှစ်ပေပတ်လည်ကျင်းထဲသို့ ပြန်ထည့်ပြီး မြေသိပ်သွားအောင် ခြေထောက်ဖြင့် ဖွဖွနင်း သိပ်ပေးပါ။ မြေအရောကို ကျင်းပြည့်အောင် ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် စိုက်ကျင်းအားလုံးကို ရေဝအောင်လောင်း၍ နှစ်ပတ်ခန့်နှပ်ထားပေးပါ။
ရေကို တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ လောင်းပေးပါ။ ကျင်းထဲရှိ မြေသား အိကျသွားပါက မြေအရောကို ကျင်းပြည့်သည်အထိ ပြန်ထည့်ပေးပြီး သိပ်အောင် ခြေဖြင့် ဖွဖွနင်းပါ။ ရေလောင်းနှပ်ထားပါ။
မြေပြင်ပြီးရင်တော့ စိုက်ဖို့ပြင်ရတော့ မှာပေါ့။ အသန်မာဆုံးသံပုရာပျိုးပင်တွေကို ရွေးပါ။ အပင်မှာ ကိုင်းခြောက်၊ ပိုးကိုက်၊ ရောဂါကျသောကိုင်း၊ အရွက်၊ ပင်စည်များကို ကတ်ကြေးထက်ထက်နဲ့ ညှပ်၍ ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ကျင်းတစ်ကျင်းလျှင် သံပုရာပျိုးတစ်အိတ်စီ ကြိုတင်ချထားပါ။
သံပုရာ ပျိုးပင် စိုက်ရန် ပထမစိုက်ကျင်းထဲမှာ ဖြည့်ထားသော မြေဆွေးအရောမြေကို ကျင်းအလယ်တည့်တည့်နေရာမှာ သံပုရာပျိုးအိတ်အမြင့်ထက် တစ်လက်မခန့်လျှော့၍ ပျိုးပင်ချရန် ကျင်းငယ်တူးပါ။ (သံပုရာပျိုးပင် စိုက်လျှင် ပျိုးအိတ် အတွင်းရှိမြေသည် စိုက်ကျင်းကြီးထဲရှိမြေထက် တစ်လက်မမြင့်နေစေရန်)၊ ပျိုးအိတ်ကိုမြေလုံးမကွဲစေရန် ဓားထက်ထက် (ခဲတံချွန်ဓား) ဖြင့် အပေါ်မှအောက်သို့ခွဲချပါ။
ပျိုးအိတ်အတွင်းရှိမြေကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပိုက်၍ စိုက်ကျင်းငယ်အတွင်းချ စိုက်ပါ။ အိတ်ကို တဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ် ပါ။ အပင်ခြေပတ်ပတ်လည်နှင့် အပင်ခြေမြေသိပ်သွားစေရန် မြေစာဖြည့်၍ လက်ဖြင့်ဦးစွာ ဖိသပ်ပေးပါ။
နောက် အပင်ခြေကိုခြေဖနှောင့်နှစ်ခုကပ်၍ ပတ်ပတ်လည်ခြေဖနောင့်ဖြင့် နင်းသိပ်ပေးပါ။ အပင်အမြစ်စွဲမြန်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးလျှင် ပျိုးပင်နှင့်ခြောက်လက်မခန့်ခွာပြီး အရှည်သုံးပေခန့်ရှိ ဝါးသေးသေးကိုချွန်၍စိုက်ပေးပါ။ ၎င်းဝါးနှင့် ပျိုးပင်ငယ်ကိုမလှုပ်စေရန် ကြိုးဖြင့်ချည်ပေးထားပါ။
ပြီးလျှင် သံပုရာပင်အခြေ၌ ကောက်ရိုး၊ မြက်ခြောက်များဖုံးအုပ်ပေးထားပါ။ စိုက်ပျိုးပြီးလျှင် ရေနေ့စဉ်လောင်းပေးပါ။ နှစ်ပတ်ခန့်ကြာလျှင် အညွန့်သစ်များ ထွက်လာပါလိမ့်မည်။ အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ကတော့ ရေမှန်မှန်လောင်းပါ။
တစ်နှစ်အတွင်း မြေဆွေး၊ ဓာတ်မြေဩဇာ ထပ်ဖြည့်ရန် မလိုသေးပါ။ တစ်နှစ်ကျော်မှသာ သတ်မှတ် ဓာတ်မြေဩဇာနှုန်းထား၊ မြေဆွေးနှုန်းထား ထပ်ဖြည့်ရန် လိုပါသည်။ အပင်ကြီးလာလျှင် ခြောက်လတစ်ကြိမ်မြေစာကျွေးပါ။ မလိုသောကိုင်းများရှင်းပါ။ အပေါ်ထောင်ထွက်သောကိုင်းများ အရင်းက ဖြတ်ပစ်ပါ။
ဖော့စဖရပ်ဓာတ်များများပါသော ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ တစ်နှစ်လေးကြိမ်ဖျန်းပေးပါ။ အပွင့်ထွက်ခါနီးရင် ယမ်းစိမ်း (ပိုတက်စီယမ်နိုက်ထရိတ်=KNO3) ဟင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ရေလေးဂါလံနှင့်ရော၍ အပင်ပေါ်ဖျန်းပေးပါ။ အလုံးကြီး၍ အလုံးလှစေပါလိမ့်မယ်။
သီးလာရင် လုံးပိန်၊ လုံးညှပ်ချွေပစ်ပါ။ ပိုးမွှားရောဂါ အထူးဂရုပြုရမှာကတော့ ပျနဲ့ မိလီဘတ်ပိုးတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ကို အမြဲလေ့လာပြီး လက်ဦးမှုရအောင်ကြိုတင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းပါ။ ရောဂါကတော့ ကိုင်းဖျားခြောက်ရောဂါဆိုးရွားစေပါတယ်။ မှိုကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ မှိုရောဂါသတ်ဆေးနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းပါလို့ မှာ လိုက်ပါရစေဗျာ။
တောင်သူ လယ်သမားကြီးများ အားလုံး သီးနှံတွေအထွက်တိုးလို့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလျက်…။ Credit – အောင်ဆန်း (စိုက်ပျိုးရေး)
Previous post သငျ့အိမျက ဘစေငျ ပိုကျပိတျနတေဲ့အခါ ပှငျ့သှားအောငျ လုပျနိုငျမယျ့ အလှယျကူဆုံး နညျးလမျး (၃) မြိုး
Next post သငျ့ကား ဆီစားနှုနျး ကို ၃၀ % ထိလြော့ခပြေးနိုငျတဲ့ လှယျကူရိုးရှငျး ကားမောငျးနညျး